Aluminium Isakhelo TV
Plastic TV Isakhelo
Yaphazamiseka Glass TV
Board Black Electronic
Guangdong Asano Technology Co., Ltd., kunye ngaphezu 100,000m² kwindawo floor, ibekwe kwenye mimandla asakhasayo kakhulu ngokukhawuleza kushishino mihla e China, i ehlangeneyo abaxhakaxhaka lwamashishini benza uphando, uyilo, uphuhliso, imveliso, kwaye ukuthengiswa shini umbala, imiboniso zorhwebo kunye nezinye izixhobo zombane.
Thina abasebenzi phezu 1500, kubandakanywa abasebenzi 15 ebambe izidanga zoogqirha, abasebenzi 20 abaneziqu umninindlu, malunga 50 iinjineli kunye nabasebenzi abangaphezulu kwama-300 iziqu eyunivesithi.
uluhlu imveliso ephambili yethu iquka umbala isisu semoto TV, nekhabhathi TV, TV epheleleyo, imiboniso yorhwebo kubandakanywa iiphaneli smart ngaphandle kwebala, signages digital, udonga ividiyo kunye nezinye CKD enxulumene kunye namacandelo SKD.
Ifakwe ngamashumi imigca zendibano phambili oluzenzekelayo exhaswa auto ngokufaka koomatshini, imigca imveliso auto spray-ipeyinti, oomatshini uphawu inkanuko kwinkqubo ngokupheleleyo, gcwalisa izixhobo uvavanyo lobuchule kunye noomatshini ngaphezulu kwama-30 isitofu zeplastiki, sinawo amandla yonyaka nokuveliswa umabonwakude 5.000.000 umbala kunye namanye amacandelo ezishiyanayo ngobukhulu ukusuka intshi-10 ukuya ku-85.
iimveliso zethu ziye kuthengiswa kumazwe angaphezu 110 nemimandla. Kwakubon 'ukuba kudlule imvume ISO9001, imvume CCC, kunye nezinye nolwamkelo zamazwe ngamazwe ezifana CB, CE, SAA njl, kwaye exhaswa zakhe eqinisekisiweyo elebhu yethu ukuthembeka kuzwelonke kwama-40 patent yesizwe, isebe lethu QC iqinisekisa ukuba zonke izinto zethu kunye neemveliso ezigqityiweyo umlinganiselo ngemilinganiselo zethu zingqongqo.
Imibuzo malunga iimveliso zethu okanye uluhlu lwamaxabiso. Nceda ushiye email yakho kwaye siza kuqhagamshelana nawe kwiiyure ezingama-24.
Products afakiwe - eKhaya - Mobile Site
Windows, Smart Tv Touch Panel , 32 Inch Led Tv , Smart Home Touch Panel,